Nepalistudio » डिप्रेशनको कारण बन्दैछ सामाजिक सञ्जाल डिप्रेशनको कारण बन्दैछ सामाजिक सञ्जाल – Nepalistudio
प्रश्न उठ्ने गर्छ, सामाजिक सञ्जालमा कति समय बिताउनु उपयुक्त हुन्छ ? र कुन हदसम्म पार गर्नाले यसको तलमा परिन्छ ? यसका विषयमा अध्ययन समेत शुरु भएका छन् । तर यसबाट समेत ठोस परिणामसम्म पुग्न सकिदैन । हालसम्म सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका बारेमा जे जति अध्यन भए यसबाट एउटा कुरा प्रष्ट छ सामाजिक सञ्जाको अत्यधिक प्रयोग गर्ने मानिस मानसिक रोगको शिकार बनिरहेका छन् । कुनै पनि कुराको नशा बस्नुले त्यसमा आवश्यकता भन्दा धेरै चासोलाई मात्र दर्शाउदैन बरु नशा लाग्नुको अर्थ मानिसहरु आफ्नो मानिक तथा आवश्यकताका लागि त्यसमाथि निर्भर हुन थाल्छ । उनीहरु आफ्नो वास्तविक दुनियामा रहेका सम्बन्धलाई वेवास्ता गर्न थाल्छन् । दैनिक जीवनर कामकाबीचमा हुने तालमेलमा समेत गडबडी देखिन थाल्छ । सामाजिक सञ्जालको नशा ठिक त्यस्तै हुन्छ, जसरी मानिसलाई मदीरा वा लागुपदार्थको नशा बस्ने गर्छ । जस्तो मानिस सामान्य तनावमा आउँदा पनि मदीरा सेवन गर्ने वा चुरोट पिउने गर्छ त्यस्तै लत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पनि देखिन्छ । बीबीसीको एउटा अध्ययनबाट के पाइएको छ भने यदि कुनै व्यक्ति दुई घण्टा वा त्यसभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा बिताउँछ भने त्यो व्यक्ति पछि गएर डिप्रेशनको सिकार हुन्छ । उसले आफूलाई अकेलोपन महसुस गर्न थाल्छ ।